Iti eluhlaza okanye iti emnyama, yeyiphi esempilweni? Fumanisa i-Intanethi ▷ ➡️ kwi-Intanethi
1 Iziselo ezahlukileyo ezivela kwisityalo esinye
2 Izibonelelo zeti eluhlaza kunye neti emnyama
3 Iti eluhlaza okanye iti emnyama: yeyiphi oyikhethayo?
Iziselo ezahlukileyo ezivela kwisityalo esinye
Abanye abantu banokukhetha kwabo phakathi kweti eluhlaza kunye neti emnyama, kodwa zombini iziselo zivela kwisityalo esinye, uCamellia sinensis. Kodwa zilungiselelwe ngendlela eyahlukileyo ye-oxidation yazo kwimeko yeti emnyama, kwaye ngokuchaseneyo kwimeko yeti eluhlaza njengoko kuchaziwe ngezantsi.
Umahluko ophambili phakathi kwezi ncasa zimbini kukuba enye ine-oxidized kwaye enye ayisiyiyo. Ukwenza iti emnyama, amagqabi ayasongwa kuqala emva koko abhenceke emoyeni ukwenza inkqubo yokugcwala. Le mpendulo ibangela ukuba amagqabi abe mnyama kwaye ivumela incasa ukuba inyuke kwaye yomelele.
Kwelinye icala, luhlaza kuyenziwa ukukhusela i-oxidation kwaye ke kukhaphukhaphu kakhulu kunombala omnyama.
Kodwa phakathi kweti eluhlaza kunye neti emnyama, ungachonga ukuba loluphi ukhetho olusempilweni?
Izibonelelo zeti eluhlaza kunye neti emnyama
Nangona bahlukile, banokubonelela ngezibonelelo ezifanayo zempilo.
Zombini iziselo ezinee-polyphenols ezinefuthe elinamandla lokulwa ne-antioxidant, ezinokuthi zinciphise umngcipheko wesifo sentliziyo. Ukongeza, zombini zine-caffeine, eyonyusa ukuphaphama kunye noxinzelelo, kunye ne-L-theanine, ekhupha uxinzelelo kunye nokuthoba umzimba.
Iti eluhlaza iqulethe i-EGCG, i-antioxidant ebonakalisiweyo ukunceda ukulwa umhlaza kunye neeseli zebacteria, kunye nokukhusela ingqondo nesibindi.
Iziphumo antioxidant yeti emnyama unako ukuphucula umsebenzi isitya segazi kunye nenkxaso ilahleko amafutha.
Iti eluhlaza okanye iti emnyama: yeyiphi oyikhethayo?
Oluhlaza kunye nomnyama unikezela ngezibonelelo ezifanayo. Iti eluhlaza inokuba neprofayili encinci yokulwa ne-antioxidant, kodwa iti emnyama yeyona ilungileyo xa ufuna ukonyusa icaffeine engenamandla njengekofu. Okwangoku, zombini ezi zongezelelo zilungile empilweni.